sida loo qoro sheekooyinka isticmaale wanaagsan
Ugu Weyn Ee Kacsan Sida loo qoro Sheekooyinka Isticmaalaha Agile
Sida loo qoro Sheekooyinka Isticmaalaha Agile
Mid ka mid ah tillaabooyinka ugu horreeya ee keenista badeecad tayo leh, ayaa ah qorista sheekooyin adeegsade wanaagsan. Mashruucan, waxaan ku sharaxeynaa sida loo qoro sheekooyinka isticmaale wanaagsan iyo waxa ay tahay in lagu daro.
Sheeko isticmaale waa meel lagu qabsado wax soo saarka wax soo saarka iyo sida magaca ka muuqata, sheekooyinka isticmaalaha ayaa sharxaya sida macaamil ama isticmaale u isticmaali doonaan sheyga.
Sheeko isticmaale waxay u taagan tahay qayb yar oo shaqeyn ah oo leh qiime ganacsi oo koox ay ku gaarsiin karto xawaare. Farqiga u dhexeeya sheeko isticmaale iyo dukumiinti dhaqameed looga baahan yahay waa heerka faahfaahinta.
Dukumiintiyada loo baahan yahay waxay u muuqdaan inay ku jiraan qoraallo fara badan oo aad u faahfaahsan, halka sheekooyinka isticmaalaha badanaa ku saleysan yihiin wadahadalka.
Waxaan u burburin karnaa qaabdhismeedka sheeko adeegsade sida:
Tilmaanta kooban ee baahida
Wadahadalka dhaca inta lagu gudajiro dib udhigista iyo qorshaynta orodka si loo adkeeyo faahfaahinta
Imtixaanada aqbalaadda ee xaqiijinaya sheekada dhammaystirka qanacsanaanta
Qodob muhiim ah oo maskaxda lagu hayo marka la qorayo sheekooyinka isticmaalaha ayaa ah in laga qoray aragtida isticmaaleha oo ugu dambeyn adeegsan doona badeecada, markaa waa muhiim in aan si cad u qeexno cidda uu yahay isticmaaluhu marka uu qorayo sheekooyinka isticmaalaha.
Sida Loo Qoro Sheekooyinka Isticmaalaha Wanaagsan
Sida caadiga ah suulka, sheeko isticmaale wanaagsan waa inay u hoggaansamaan soo gaabinta INVEST:
Aniga ndependent - sheekooyinka isticmaaleyaashu waa inaysan ku tiirsaneyn midba midka kale sidaa darteed waa loo horumarin karaa si kasta oo ay tahay.
N egotiable - Ka fogow faahfaahin badan; ka dhig kuwo dabacsan si ay kooxdu u hagaajiso inta sheekada ay hirgelinayso.
V aluable - sheekada waa inay siisaa xoogaa qiimo ah isticmaaleyaasheeda.
WAA firfircoonaan karo - kooxdu waa inay awood u yeelato inay qiyaasto sheekada.
S mall - sheekooyinka isticmaaleyaashu waa inay yaryihiin oo ay ku habboonaan karaan orod; sheekooyinka waaweyn way adag tahay in la qiyaaso oo la qorsheeyo.
T la qiyaasi karo - hubi in waxa la horumarinayo la xaqiijin karo oo si ku filan loo tijaabin karo.
Qaab noocee ah ayaa loo adeegsadaa in lagu qoro sheekooyinka isticmaalaha?
Sheekooyinka isticmaalaha guud ahaan waxay leeyihiin qaabkan soo socda:
_Sida a, waxaan rabaa sidaas ._
Tusaale: Sida a macmiil ee abc.com, waxaan rabaa a soo gal shaqeynta si aan awoodo ka hel faahfaahinta koontada internetka .
Sidii hore loo soo sheegay, fiiro gaar ah u yeelo cidda isticmaaleysa sheyga oo iska ilaali doorka guud ee 'Isticmaalaha'. Haddii aadan aqoon cidda adeegsadayaasha iyo macaamiisha yihiin iyo sababta ay u doonayaan inay u isticmaalaan badeecada, markaa waa inaad maahan qor sheekooyinka isticmaalaha.
Qaybta koowaad ee sheekada isticmaalaha waa Sheeko. 2-3 weedho ayaa loo isticmaalay in lagu sharaxo ujeedka sheekada. Kaliya waa soo koobid ujeedka.
Qodobka ugu muhiimsan ee sheekada isticmaaleha ayaa ah wada hadalada ay tahay inay si isdaba joog ah ugu dhacaan kooxda horumarka, macaamilka, Mulkiilaha Alaabada iyo daneeyayaasha kale si loo adkeeyo faahfaahinta sheekada isticmaaleha.
Shuruudaha aqbalaaddu waxay matalayaan shuruudaha qanacsanaanta ee loo qoro sida dhacdooyin, badiyaa qaabka Gherkin (Marka la bixiyo, Marka, Markaa). Shuruudaha aqbalida sidoo kale waxay qeexaysaa Qeexitaanka La Sameeyay sheekada.
Yay tahay inuu qoro sheekooyinka isticmaalaha?
Xaaladaha badankood, sheekooyinka isticmaalaha waxaa qora a Mulkiilaha Alaabta ama Falanqeeye Ganacsi oo mudnaanta lagu siiyay dib u dhaca alaabta. Si kastaba ha noqotee, taasi maaha in la yiraahdo waa mas'uuliyadda kaliya Mulkiilaha Badeecada inuu qoro sheekooyinka isticmaalaha. Xaqiiqdii, xubin kasta oo ka mid ah kooxda ayaa qori kara sheekooyinka isticmaalaha, laakiin waa mulkiilaha badeecada masuuliyadiisa inay hubiso dib u dhac ku yimaada sheekooyinka isticmaalaha oo ay jiraan oo mudnaanta la siinayo.
Maxay muhiim tahay, waa sheekooyinka isticmaalaha waa in aan loola dhaqmo sida dukumiintiyada looga baahan yahay oo markii la qoro loo dhiibi doono kooxda horumarinta si loo fuliyo.
Sheekooyinka isticmaalaha waa in loo arkaa inay yihiin qaab lagu dhiirrigelinayo wada-hadallada u dhexeeya Mulkiilaha Badeecada iyo kooxda horumarinta, sidaas darteedna waa in si wada-jir ah loo qoraa inta lagu gudajiro kal-fadhiyada is-qurxinta badeecadda.
Faa'iidada ka mid noqoshada kooxda horumarinta qorista sheekooyinka isticmaalaha ayaa ah in haddii ay jiraan wax caqabado farsamo ah, horay loo sii muujin karo. Imtixaanyaashu waxay si gaar ah ugu dari karaan qiimaha dhismaha qaabab wax ku ool ah oo aqbalaad ah waxayna horay u sii qorsheeyaan waxa u baahan in la baaro iyo sida loo sameeyo.
Sidee Faahfaahsan u tahay Sheekooyinka Isticmaalaha?
Sheekooyinka isticmaalaha waxay diiradda saaraan qiimaha macaamiisha.
Farqiga aasaasiga ah ee u dhexeeya sheekooyinka isticmaalaha iyo qaababka kale ee qeexitaanka shuruudaha waa heerka faahfaahinta. Sheeko adeegsade ayaa tusaale u ah shaqada la qabanayo, maahan sharaxaad buuxda ee shaqada. Shaqada dhabta ah ee la qabanayo waxaa lagu xoojiyay iyadoo la adeegsanayo iskaashiga ku xeeran sheekada isticmaaleha maadaama horumarka nidaamka uu socdo.
Haddii sharraxaadu aad u dheereyso (in ka badan waxa ku habboon kaarka tusmada ah), waa inaad dib u booqataa sheekada isticmaalaha. Waxay u badan tahay inaad iskudayeyso inaad ku darto faahfaahin aad u badan.
Xusuusnow in ujeedada sheekada isticmaaleyaashu ay tahay dhiirigelinta iskaashiga. Looguma talagalin in lagu qoro wax kasta oo shaqada ka mid ah, maadaama ay caadi ahaan ku jirto bayaannada shuruudaha dhaqameed.
Intaa waxaa sii dheer, macluumaad aad u tiro badan oo ku saabsan sharraxaadda waxay u horseedi kartaa macluumaad maqan oo ku saabsan shuruudaha oggolaanshaha
Kahor intaadan aqbalin in laga shaqeeyo sheeko, kooxda waa inay fahmaan shuruudaha aqbalaadda. Kuwani waa lagama maarmaan in la ogaado waxa loo baahan yahay in la sameeyo si loogu qanco sheekada isticmaalaha. Shuruudaha aqbalida waa inay ahaadaan kuwa faahfaahsan oo qeexaya marka sheekada isticmaalaha lagu qanco, laakiin aan sidaa u faahfaahsanayn si loo joojiyo iskaashiga.
Khaladaadka Caadiga ah Marka La Qorayo Sheekooyinka Isticmaalaha
Faahfaahin rasmi ah ama aad u tiro badan. Milkiileyaasha alaabada leh ujeedooyin wanaagsan badiyaa waxay isku dayaan inay qoraan sheekooyin isticmaale oo aad u faahfaahsan. Haddii koox ku aragto sheeko qorshaynta soo noqnoqodka oo u eg dukumiinti looga baahan yahay IEEE, waxay badanaa u qaataan in faahfaahinta oo dhami jirto oo ay ka boodi doonaan wadahadalka faahfaahsan.
Qorista sheekooyinka isticmaale ee howlaha Farsamada. Inta badan awoodda Agile waxay ka timaaddaa haysashada kororka shaqada ee software dhammaadka soo noqnoqod kasta. Haddii sheekooyinkaagu runti yihiin hawlo farsamo, inta badan kuma dhammaato barnaamij shaqeynaya dhammaadka soo noqnoqoshada kasta, waxaadna luminaysaa dabacsanaanta mudnaanta.
Ka bood sheekada. Sheekooyinku si ula kac ah ayaan u caddayn ka hor qorshaynta soo noqnoqodka. Haddii aad ka booddo wadahadalka shuruudaha aqbalaadda, waxaad halis ugu jirtaa inaad u dhaqaaqdo jiho khaldan, kiisaska dacallada oo kaa maqnaada ama aad iska indhatirto baahida macaamiisha.
Ma haysaa wax talooyin ah oo lagu dari karo macluumaadka kor ku xusan si aad u qorto sheekooyinka isticmaalaha wanaagsan? Xor ayaad u tahay inaad ku dhejiso faallooyinka.
java hubi haddii tusaha jiro
java badal khariidada json
Java - Sida loo Akhriso Faylka JSON sida Xarkaha
k6 - Khibrad Sameeyaha Ugu Fiican ee Tijaabada Xamuulka
Maskaxda Imtixaanka Agile iyo Doorka Tijaabiyaha Agile
Sida loo Qarsho loona Qarxiyo Xogta Python iyadoo la adeegsanayo Maktabadda 'Cryptography Library'
Java Isbarbardhig Labo Liis
Tijaabinta Kheyraadka QA la'aantiis